> Resource > macruufka > Sidee inuu ka soo kabsado iPhone Data waayay macruufka 6 jailbreak
Ma suurto gal inuu ka soo kabsado iPhone Data waayay macruufka 6 jailbreak?
The macruufka dambeeyay 9 ayaa dhawaan la sii daayay, iyo dad badan oo isticmaala iPhone go'aansato inaad cusboonaysiiso qalabka ay u macruufka 9. Si loo sameeyo macruufka 9 dheeraad ah oo awood badan oo dheeraad ah oo si sahlan loo isticmaalo, qaar ka mid ah u nugul JAILBREAK ee macruufka 9 orodka ee ay iPhone 6s, iPhone 6 iyo iDevices kale.
Halkan yimaado dhibaatada soo gaartay xogta lama filaan ah ka dib markii jailbraking macruufka 9. Suurtagalnimada waayaan xog muhiim ah in aad sida farriimaha qoraalka ah, xiriirada, sawiro, cadaymaha cod, jadwalka taariikhda, videos iyo music ma aha caato ah. Laakiin ma noqon mid aad u welwelsan tahay. Weli waxaad leedahay fursad weyn inuu ka soo kabsado xogta iPhone ka dib markii macruufka 9 JAILBREAK.
Hel ah iPhone qalab kabashada sawir hore: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows). Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad ka bogsato xogta ay helaan Lugood gurmad files. Xitaa in aad si toos ah iskaan karaa ceshan xogta ka iPhone 6s / 6/5 / 4s / 4 / 3GS, marka aanad haysan gurmad Lugood.
Download version maxkamad hoose.
2 Talaabada inuu ka soo kabsado Faylal ay ka macruufka 6 jailbreak iPhone
Tallaabada 1. Scan Lugood ee kaabta aad iPhone
Sida aynu wada ognahay, Lugood dhalin lahaa file gurmad ah marka aad u hagaagsan iPhone la. Bilow barnaamijka, iyo dhammaan qalabka aan Lugood gurmad files on your computer la marsiiyey doonaa oo soo bandhigay. Dooro gurmad u ah qalab aad ka dibna riix "Start Scan".
Tallaabada 2. Ladnaansho iPhone Data waayay jailbreak
Marka gool scan ah, waxyaabaha uu ka helay gurmad Lugood la tusay doonaa sida hoos ku qoran. Dooro "Xiriirada" on xaq u leeyihiin inay ku eegaan faahfaahinta. Sax kuwa aad doonaysid in aad ka dibna soo kabsado guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Waxa kaliya si sahlan, raaxaysan naftaada!
Waxaa had iyo jeer waa muhiim in la sameeyo gurmad Lugood marka aad go'aansato in aad u cusboonaynta macruufka ama u JAILBREAK. Oo tan iPhone qalab kabashada xogta, waxaad si fudud u soo kaban karto, xogta laga gurmad Lugood files.For iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS, waxaad soo kaban karto, files iyadoo lagu eegayo ah qalab si toos ah laftiisa.